Faah faahinta Qarax goor dhaweyd ka dhacay magaalada Muqdisho – Radio Daljir
Faah faahinta Qarax goor dhaweyd ka dhacay magaalada Muqdisho
Maajo 11, 2022 9:15 b 0
Ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay, siddeed kalena waa ku dhawacmeen kaddib markii qarax is-miidaamin ah oo lala beegsaday gaadiid marayay agagaarka KM4 ee magaalada Muqdisho.
Wararka horudhaca ah ayaa intaas ku daraya in dadka dhintay ay ku mid yihiin askar ka tirsan ciidamada dowladda.
Qaraxan ayaa kusoo beegmay xilli goor dhaweyd teendhada Afisyooni ay ka bilaabatay maalinta koowaad ee hadal-jeedinta musharaxiinta madaxweynaha oo ay ku tartamayaan 39 musharax.
Wixii kusoo kordha halkan halkan ayaad kala socon doontaan.
Weriyihii Aljazeera ee Daanta Galbeed Shariin Abu Caqiil oo la dilay